Imaski yokuvikela engu-Kn95, imaski yokuvikela engu-N95, imaskhi yezokwelapha enokulahlwa - uFeliks
I-Kn95 iyi-mask ejwayelekile yamaShayina. I-Kn95 respirator iluhlobo lokuphefumula olunokusebenza kahle kokufayila ezweni lethu. Imaski ye-Kn95 ne-N95 imaski empeleni ziyefana ngokusebenza kokuhlunga kokuhlungwa.
Imaski elahlayo yenziwa ngezendlalelo ezingaphezu kwezintathu zendwangu engeyona eyalukiwe; ekhaleni yenziwa ngobungoti bezemvelo yonke imicu yepulasitiki, ingenawo noma iyiphi insimbi, enamamashini we-Disposable masks (imaski yokuhlinza yezokwelapha) ingavimba ukutheleleka kwepheji lokuphefumula ngezinga elithile, futhi ayikwazi ukuvimba i-haze.
I-KN95 maski izingqimba ezi-5
I-KN95 mask mask 4 izendlalelo
Imaski elahlekayo yezokwelapha ezingxenyeni ezi-3 nesikhwama esingu-10 / isikhwama
Imaski yokuvikela engu-N95 eqinisekiswe i-FDA CE
Inkampani yethu yasungulwa ngo-2005, ingungcweti we-R & D okukhiqizwa kanye nokuthengisa kwe-Notbook, amanothi weStick, ifolda yeSanitizer, isikhumba sePU, impahla yePPE njll. Inkampani Yezimboni. Sitholakala eShenzhen idolobha ngokufinyelela okulula kwezokuhamba. Kuze kube namuhla, Sineqembu labantu abangaphezu kwama-300 namashumi eminyaka wesipiliyoni sokuhweba kwangaphandle, Imikhiqizo yethu ithunyelwa eYurophu, eSouth America, e-Australia, e-Afrika nase-Asia.
Akunandaba noma yimuphi umkhiqizo, sizoqala kusukela ekuthengweni kwezinto ezibonakalayo ezingavuthiwe, ekukhiqizweni komkhiqizo, kufakwa emaphaketheni nasekuhanjisweni, kuya ekutholeni amasiko kanye nokushiya itheku, isinyathelo ngasinye silawulwa ngokuqinile ngabachwepheshe, ukuqinisekisa ukuthi izimpahla zisesimweni esihle futhi zifinyelela amakhasimende ngesikhathi.
Umphakeli wekhwalithi yekhwalithi yaseChina